China T shirt ukushisa cindezela umshini ifektri abakhiqizi | Taile
Isilawuli se-digital timer siyashintshwa kuze kube yimizuzwana engu-999. Umshini wokucindezela ukushisa ubuye ube negeji yedijithali yokushisa esukela ku-32-455 F. Ukugcina ucindezele inkinobho "SET" isikhashana kungashintsha iFahrenheit.neCelsius temparature emuva naphambili
Isibambo esisebenza ngesandla esivulekile nesiseduze kulula ukusisebenza futhi singalungiswa ngesinqa sokucindezela ngemuva komshini. Amandla nokuqina kwayo kwezimboni kuvumela ukusetshenziswa kwesikhathi eside, okwenza kube wutshalomali olukhulu olunenani elikhethekile phakathi kwabancintisana nabo.
I-3.POWERFUL HEAT PRESS - 110 V 1200 W, ifudumeza izinga lokushisa ngokushesha futhi ngokulinganayo kungakapheli imizuzu engu-5 kuya kwengu-10 ivuliwe, kuncike kubushushu obukhethayo. Induku yokushisa esezingeni eliphakeme, ukuqhuba okushisayo okusebenzayo.
I-4.Teflon camera platen yokushisa nokushisa okumelana ne-silicone pad kwenza kube umshini wokuphrinta we-t-shirt ongcono kakhulu, uyaqinisekiswa ngomphumela ococekile. Uyacelwa ukuthi ungakhathazeki ngokuthi izembatho zakho zingase ziphanjaniswe ngoyinki. Uyinki ngeke uchitheke lapho udlulisa umshini. Nge-Teflon camera platen, ngeke sisaba khona isidingo sokuthenga amashidi we-Teflon, wonge imali, wonge umzamo.
I-5.LARGE HEAT SUBLIMATION HEAT PRESS- ithatha indawo yokushisa eyi-15 × 15, indawo enkulu yokusebenza ukuze ukwazi ukukhipha ukukhiqizwa okukhulu. Isisindo Esiphelele: 48.5 lbs, ukuqina okukhethekile kwe-Aluminium platen kuqinisekisa ingcindezi nokuqina.
6.KUSETSHENZISWA KANINGI KANYE KULULA UKUSETSHENZISWA: Umshini wokushisa ungasetshenziselwa izikibha, izikhwama, amacansi egundane, amabhanela, izingubo zokulala, njll. Isipho sikaKhisimusi esinconywe kakhulu.
7.Full digital control phezu kwaleyo mingcele emibili. Ithempelesha Ibanga: 32 kuye ku-455 degrees F, Isikhathi Ibanga 0 kuya ku-999 imizuzwana, Isikhathi se-elekthronikhi nokulawula ukushisa, isikhathi esiqondile esisethiwe.
8.Easy ukusebenzisa isibambo evulekile futhi uvale eqinile nge entwasahlobo ukusiza; Ukubanjwa kwe-ergonomic kukhulisa ukunethezeka nokukhiqiza;
Isikhathi se-digital esibonwayo nokubonisa izinga lokushisa kuzoba umsizi wesikhulu ngesikhathi somsebenzi wakho.
15 * 15 intshi
Langaphambilini Umshini wokucindezela ukushisa weProtale
Olandelayo: Umshini omusha we-5 koku-1 wokushisa wokushisa
Umshini Wokushisa Wokushisa WamaT Shirts
Shirt Cindezela Umshini
T Shirt Ukushisa Cindezela
Umshini Wokucindezela Ukushisa weT Shirt
T Shirt Cindezela
Umshini Wokucindezela Shirt